Posted on October 27, 2014 November 20, 2020 by csr 1687
Mushure meTurbo, iyo chihuahua akazvarwa asina makumbo epamberi, akabata moyo weInternet pamusoro pezhizha, akabata kutarisisa kwaMark Deadrick, uyo anoita hupenyu hwake achigadzira maroketi zvikamu.
Deadrick akadzidza nezvaTurbo kubva kuna Ashley Looper, chiremba wemhuka akamutora mushure mekunge asiiwa aine mavhiki mana. Panguva iyoyo, Turbo aive kushandisa chingoro chenguva pfupi chakagadzirwa kubva kumatoyi. Looper akatumira nyaya yake online mukuyedza kutsvaga rubatsiro.
Deadrick, uyo ari mutungamiri wekambani anonzi 3dyn, akaona mukana wekushandisa tekinoroji kushandura iyo remara Hupenyu hwembwanana uye ndokuendesa 3D-yakadhindwa wiricheya kuenda kuvaridzi vaTurbo. Akaedza mamodheru akati wandei asati awana dhizaini yaive yakakodzera mutumbi waTurbo.
Looper akabhururuka nemumwe wake, Ray Hurt, naTurbo kubva kumba kwavo Indianapolis kunosangana neSan Diego-based Deadrick kekutanga mu New York Guta kuPurina Zvirinani NePanyama Summit muna Gumiguru 14.